Vehivavy Saodiana Mpikatroka, Nandresy Afaka Mamily Saingy… · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Septambra 2017 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, русский, Español, Français, Italiano, Magyar, Ελληνικά, Português, polski, English
Asakanto ho fanohanana ilay fanentanana “Izaho Ihany No Mpiambina Ny Tenako”. Sary : Artista @MsSaffaa
Lahatsoratra nosoratan'i Khalid Ibrahim, tale mpanatanteraka ao amin'ny Ivontoerana Mpiaro Zon'Olombelona ao Golfa, fikambanana iray tsy mitady tombony ara-bola, tsy mainkina, manohana ny fahalalahana maneho hevitra, ireo fikambanana sy ireo fivoriana am-pilaminana ao amin'ny faritra Golfa sy ireo firenena mpifanolo-bodirindrina aminy.
Ny 26 Septambra, namoaka didy ny mpanjaka Saodiana, Salman, ho an'ny ministeran'ny atitany mba hanombohana ny famoahana fahazoandàlana hamily fiara ho an'ny vehivavy, hamela ireo vehivavy hitondra fiara manerana ny faritry ny fanjakàna nony farany. Ny fampiharana io fanapahankevitra efa nandrasana hatry ny ela io anefa tsy hanomboka raha tsy amin'ny 24 Jona 2018, aorian'ny fananganana kaomity iraisan'ireo ministera ao anatin'ny 30 andro nivoahan'ilay didy, mba handrafitra ireo fepetra momba izany.
Taona marobe nanaovana fanentanana sy nitolomana teo ambany fitarihan'ny “Fanentanana Hahafahan'ireo Vehivavy Mamily Fiara” no nialoha làlana ity fiovàna ity, fanentanana izay efa tany amin'ny 6 Novambra 1990, fony nisy vehivavy 47 nanao hetsipanoherana teny an'araben'i Riyadh renivohitra, namily fiara ho fanoherana ilay fandraràna azy ireo. Nosakanan'ireo polisy nalefa hifanatrika amin'ilay hetsipanoherana ny 13 tamin'ireo fiara nentin-dry zareo.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy dia narahanà fanentanana maromaro nitovy taminy izy io, notarihan'ireo vehivavy Saodiana namily ny fiarany ho fihantsiana ilay fandraràna. Fisamborana mpikatroka maro no nasetrin'ireo manampahefana Saodiana azy, toy ny tranga niseho tamin'ny 1 Desambra 2014 fony nentina tany am-ponja i Maysaa Al-Amodi sy Lujain Al-Hathlol rehefa namily ny fiaran'izy ireo.
Na mbola tsy ho ampiharina ato anatin'ny 10 volana aza ilay didin'ny mpanjaka, misy ihany ny ahiahy maro hoe ity kaomity vaovao iraisan'ireo ministera ity dia hanomboka ny asany amin'ny fandraisana ireo hafatrafatra efa navoakan'ny Filankevitra Shura Saodiana dieny mialoha, rantsana iray fakankevitra tsy manana fahefana loatra izay ahitàna fanomezana tolodalàna sy torohevitra ho an'ny governemanta ao anatin'ny fitondram-panjaka madio rano. Ny sasany amin'ireny hafatrafatra ireny hoe tokony tsy ho latsaky ny 30 taona ny taonan'ireo vehivavy mamily fiara, tsy maintsy nahazo ny fankatoavan'ny mpiambina azy ilay vehivavy vao mahazo mamily fiara, ary ao an-tanàna ihany izy no mahazo mamily fiara, manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 8 ora alina ny Sabotsy hatramin'ny Alakamisy, ary ny Zoma manomboka amin'ny 12 ora alina hatramin'ny 8 ora.
Na eo aza ny fanapahankevitra noraisina tsy ela akory izay, mamela ireo vehivavy hahazo mamily fiara sy hiditra ao amin'ny King Fahd Stadium ao Riyadh, sambany nandritra ny nankalazàn'ny firenena ny faha-87 taonan'ny nijoroan'ny fanjakàna, mbola voasakantsakan'ireo fepetra manavakavaka vehivavy sy mikendry ireo izay mitady fiovàna ihany izany fiovàna tiana hisy ao Arabia Saodita izany .
Raha ny marina, ny rafitra fiahian'ny lehilahy feno fanavakavahana ao Arabia Saodita dia mbola mitoetra hatrany. Ao anatin'io rafitra io, ireo vehivavy dia mila ny fankatoavan'ireo lehilahy, na ny fanatrehan'ny lehilahy iray avy amin'ny fianakaviany ho toy ny mpiambina azy rehefa hivahiny ivelan'ny fireneny, rehefa mangataka hahazo pasipaoro, hanambady na hatramin'ny hoe hampanofa ny tranony aza. Marobe ireo mpiaro zon'olombelona sy mpikatroka, isan'ireny i Essam Koshak sy Mariam Al-Otaibi, no nosamborina noho ny nandraisan'izy ireo anjara tamin'ilay fanentanana #IAmMyOwnGuardian (Izaho ihany no mpiambina ny tenako) izay nitaky fampitsaharana ny rafitra fiahian'ny lehilahy.
Tato anatin'ny herinandro vitsy, nisy onjam-pisamborana natombok'ireo manampahefana Soadiana nikendreny ireo mpanoratra, mpampianatra, mpikatroka an-tserasera ary mpitarika fivavahana. Nàka endrika fanaovana bemidina tany an-trano sy fangihàzana ny fitaovana eletronika ireny fisamborana ireny. Isan'ireo voasambotra tsy ela akory ny mpampianatra, Abdullah Al-Malki, fantatra amin'ny fanohanany ny zon-olombelona, sy Essam al-Zamel, fantatra amin'ny fanoratany momba ny filàna fanavaozana ara-toekarena ao anatin'ny faritry ny fanjakàna.